पंतोप्रजोल बनाम ओमेप्राज़ोल: भिन्नता, समानता र जुन अझ राम्रो छ - औषधि बनाम मित्र | सेप्टेम्बर 2021
कम्पनी चेकआउट मनोरञ्जन औषधि जानकारी, समाचार औषधि बनाम मित्र कम्पनी, चेकआउट स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर समाचार घरपालुवा जनावर समाचार, कल्याण कल्याण स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण समुदाय, कम्पनी कम्पनी, औषधि जानकारी प्रेस
मुख्य >> औषधि बनाम मित्र >> पंतोप्रजोल बनाम ओमेप्रजोल: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि उत्तम छ
पंतोप्रजोल र ओमेप्रजोल दुई प्रोटोन पम्प अवरोधकर्ताहरू (पीपीआई) हुन् जुन पाचन अवस्थाको उपचारको लागि प्रयोग गरिन्छ। दुबै औषधिहरू ग्यास्ट्रोइसेफेगल रिफ्लक्स रोग (जीईआरडी) को लागी प्रयोग गर्न सकिन्छ, ईर्ष्याको अधिक पुरानो रूप, र इरोसिभ एसोफेगिटिस। ती पेटमा एसिड स्राव घटाएर काम गर्दछन्। जबकि प्यानटोप्राजोल र ओमेप्रजोल समान औषधी हो, तिनीहरूको पनि केही भिन्नता हुन्छ।
पान्टोप्राजोल र ओमेप्रजोल बीचको मुख्य भिन्नता के हुन्?
पंतोप्रजोल (प्यानट्रोपाजोल कुपन) प्रोटोनिक्सको सामान्य नाम हो र वर्तमानमा यो पर्चेको साथ मात्र खरीद गरिएको छ। वयस्क र years बर्ष भन्दा बढी उमेरका बच्चाहरूमा ER हप्ता सम्मको सामान्य अवधिमा GERD लाई उपचार गर्न FDA- अनुमोदित छ। पन्तोप्राजोल (अधिक पंतोप्रजोल विवरण) ढिलाइ-रिलीज ट्याब्लेट वा तरल निलम्बनको रूपमा आपूर्ति गरिन्छ। यो अस्पताल वा क्लिनिकमा इंट्रावेनस (IV) इंजेक्शनको रूपमा पनि चलाउन सकिन्छ।
ओमेप्रजोल (ओमेप्रजोल कुपन) लाई यसको ब्रान्ड नाम, प्रीलोसेक द्वारा पनि चिनिन्छ, र प्रिस्क्रिप्शन वा ओभर-द-काउन्टरमार्फत खरीद गर्न सकिन्छ। यसले pantoprazole पीपीआईको रूपमा काम गर्दछ। यद्यपि यो एफडीए-द्वारा पनि डुओडेनल अल्सर, हेलिकोब्याक्टर पाइलोरी (एच। पाइलोरी) संक्रमण, र GERD र erosive esophagitis को अतिरिक्त गैस्ट्रिक अल्सरको उपचार गर्न अनुमोदित छ। ओमेप्रजोल (अधिक ओमेप्रजोल विवरणहरू) ले १ वर्ष र अधिक उमेरका र केटाकेटीमा GERD लाई उपचार गर्न सक्दछ। यो ढिलाइ-रिलीज क्याप्सूल, ट्याब्लेट, र तरल निलम्बनको रूपमा आउँछ।
पान्टोप्राजोल र ओमेप्रजोल बीचको मुख्य भिन्नता
ब्रान्ड नाम के हो? पन्तोप्राजोल
कुन फार्म (हरू) ड्रग भित्र आउँछ? मौखिक ट्याब्लेट, ढिलाइ-रिलीज
IV इंजेक्शन / आसव मौखिक ट्याब्लेट, ढिलाइ-रिलीज
मौखिक क्याप्सूल, ढिलाइ-रिलीज
IV इंजेक्शन / आसव
मानक खुराक के हो? 40 मिलीग्राम दैनिक एक पटक २० मिलीग्राम दैनिक एक पटक
विशिष्ट उपचार कति लामो हुन्छ? Weeks हप्ता सम्म To देखि weeks हप्ता
कसले औषधी प्रयोग गर्दछ? वयस्क र children बर्ष र माथिका बच्चाहरु वयस्क र १ बर्ष र माथिका बच्चाहरू
प्यान्टोप्राजोल र ओमेप्रजोल द्वारा उपचारका सर्तहरू
प्यानटोप्राजोल र ओमेप्रजोल दुबै एफडीए GERD र इरोसिभ एसोफैगिटिसबाट ईर्ष्या लक्षणहरूको उपचार गर्न अनुमोदित छन्। पान्टोप्राजोल र ओमेप्रजोल जस्ता पीपीआईहरू नियमित एन्ट्यासिडहरू भन्दा बढी शक्तिशाली हुन्छन्, जस्तै हिस्टामाइन (एच २) ब्लकरहरू। तिनीहरू प्राय: को लागी निर्धारित गरीन्छन् छोटो-अवधि उपचार weeks हप्ता भन्दा बढि लामो समय सम्म।
पन्तोप्राजोल र ओमेप्राजोलले हाइपरसक्रेटरी अवस्थाको पनि उपचार गर्न सक्दछ जसले पेटलाई धेरै ग्यास्ट्रिक एसिड उत्पादन गर्दछ। जोलिinger्गर-एलिसन सिन्ड्रोम एक अवस्था हो जुन एसिड हाइपरसक्रेसन निम्त्याउन सक्छ र अग्न्याशय वा डुओडेनम (सानो आंतको पहिलो भाग) मा ट्यूमर समावेश गर्दछ।
पन्तोप्राजोल र ओमेप्राजोलले अन्य अवस्थाहरू जस्तै डुओडेनल अल्सर, ग्यास्ट्रिक वा पेटको अल्सर, र पेप्टिक अल्सरको उपचार गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ। यी अल्सर प्रायः एच। पाइलोरी भनिने ब्याक्टेरियाबाट हुने संक्रमणको कारण हुन्छ। जबकि ओमेप्रजोललाई एच ड्रम pylori को उपचारको लागी अन्य औषधिको साथ अनुमोदन गरिएको छ, pantoprazole लाई पनि यो संक्रमणको लागी लेबलको प्रयोग गरीन्छ।
दुबै औषधिहरूको लागि अन्य अफ-लेबल प्रयोगहरूमा ब्यारेटको एसोफैगस र अल्सर समावेश हुन्छन् जुन ननस्टेरियल एन्टी-इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स (एनएसएआईडी) को प्रयोगबाट आउँछ।
सर्त पन्तोप्राजोल ओमेप्राजोल
इरोसिभ एसोफैजाइटिस हो हो
जोलिन्गर-एलिसन सिन्ड्रोम हो हो
ग्रहणी अल्सर अफ-लेबल हो
ग्यास्ट्रिक अल्सर अफ-लेबल हो
ब्यारेटको एसोफैगस अफ-लेबल अफ-लेबल
अपच अफ-लेबल अफ-लेबल
NSAID प्रेरित अल्सर अफ-लेबल अफ-लेबल
पेप्टिक अल्सर अफ-लेबल अफ-लेबल
इन्फ्लुएन्जा इन्फ्लुएन्जा भन्दा खराब छ
Pantoprazole वा omeprazole अधिक प्रभावी छ?
प्यानटोप्रजोल र ओमेप्रजोल GERD को उपचारमा प्रभावकारी देखाइएको छ। मा मेटा-विश्लेषण यसले different० भन्दा बढी बिभिन्न अध्ययनहरूलाई पूल गर्‍यो, परिणामहरूले पीपीआईको बिचमा प्रभावकारितामा खास फरक देखिन। पान्टोप्राजोल ओमेप्रजोल जत्तिकै प्रभावकारी पाइएको थियो। केही डबल-ब्लाइन्ड क्लिनिकल परीक्षणहरूमा अन्य पीपीआईहरू पनि समावेश थिए नेक्सियम (एसोमेप्रजोल) , lansoprazole (Prevacid), र Rabeprazole (Aciphex)।
एक अध्ययन मेटा-विश्लेषणमा समावेश पाए कि प्यान्टोप्राजोल पेटको अल्सरको उपचारमा ओमेप्रजोल भन्दा बढी प्रभावकारी थियो। परिणामहरू समीक्षाको आधारहरूमा प्रभाव पार्ने दरहरूमा studies अध्ययनहरूबाट पूल गरियो। जबकि प्यानटोप्राजोल बढी प्रभावकारी फेला पर्‍यो, असमान डोजिंगको साथ त्यहाँ त्रुटिहरू हुन सक्छ।
प्यानटोप्राजोल र ओमेप्रजोल दुबै तुलनात्मक औषधि हुन् प्रभावकारिताको हिसाबले। एक उपचार गरिरहेको अवस्था र औषधी लागत को आधार मा अर्को भन्दा एक लाई प्राथमिकता दिन सकिन्छ। कुन निर्धारण गर्न डाक्टरको परामर्श लिनुहोस् पीपीआई राम्रो हुन सक्छ तिम्रो लागि।
प्यान्टोप्राजोल बनाम ओमेप्रजोलको कभरेज र लागत तुलना
पंतोप्रजोल एक जेनेरिक औषधि हो जुन प्राय: मेडिकेयर र धेरै जसो बीमा योजनाहरूले ढाक्छ। Pantoprazole को औसत खुद्रा लागत around२२ को आसपास छ। तपाई सिंगलकेयर कूपनको साथ अधिक बचत गर्न सक्नुहुनेछ जसले लागत down २ to लाई तल ल्याउन सक्छ।
ओमेप्राजोल एक जेनेरिक औषधि हो जुन प्राय: मेडिकेयर र धेरै जसो बीमा योजनाहरूले ढाक्छ। ओमेप्रजोलको औसत खुद्रा लागत around $..99। को आसपास छ। एकलकेयर कूपनको साथ तपाईं 30०, २०mg क्याप्सूलको लागि $ -20-२० सम्म भुक्तान गर्न सक्नुहुन्छ।
मानक खुराक Mg० मिलीग्राम (of० को मात्रा) २० मिलीग्राम (of० को मात्रा)
एकलकेयर लागत $ २। -20 -20 -२०
प्यानटोप्रजोल र ओमेप्रजोलको सामान्य साइड इफेक्टहरू
पन्तोप्राजोल र ओमेप्रजोलले साइड इफ्रेक्टहरू निम्त्याउन सक्छ जस्तै टाउको दुख्ने, चक्कर आउने, मतली, र बान्ता गर्ने। तीनिहरूले अन्य ग्यास्ट्रोइंटेस्टाइनल साइड इफेक्टहरू पनि निम्त्याउँदछ जस्तै झाडापखाला, कब्ज, पेट वा पेट दुखाइ, र पेट फूलना वा ग्यास। अन्य साझा साइड इफेक्टमा जोड्ने दुखाइ, माथिल्लो श्वास नलीको संक्रमण, र एस्थेनिया वा ऊर्जाको कमी हुन सक्छ।
ओमेप्रजोलले पनि एसिड रेगर्गेसन, कमर दुख्ने, र खोकी जस्ता साइड इफेक्टहरू निम्त्याउन सक्छ। पन्तोप्राजोल यी खास साइड इफेक्टहरू जहिले पनि देखाउनको लागि अध्ययन गरिएको छैन।
टाउको दुखाई हो १२.२% हो %%
पखाला हो 8.8% हो %%
कब्ज हो <2% हो दुई%
पेट दुख्ने हो .2.२% हो %%
बान्ता हो 3.3% हो %%
फ्याटुलेन्स हो 9.9% हो %%
चक्कर हो %% हो दुई%
जोड़को दुखाई हो २.8% हो N / A
पुराना हो <2% हो दुई%
एसिड रेगर्गेसन हैन - हो दुई%
माथिल्लो श्वसन पथ संक्रमण हो N / A हो दुई%
कमजोरी / उर्जाको अभाव हो N / A हो १%
ढाड दुख्नु हैन - हो १%
खोकी हैन - हो १%
* सम्भावित सबै साइड इफेक्टका लागि डाक्टर वा फार्मासिष्टबाट परामर्श लिनुहोस्।
मुहान: डेलीमेड (प्यान्टोप्राजोल) , डेलीमेड (ओमेप्रजोल)
पेन्टोप्राजोल बनाम ओमेप्रजोलको ड्रग अन्तरक्रिया
दुबै पान्टोप्राजोल र ओमेप्राजोलले समान औषधिहरूको अन्तरक्रिया गर्न सक्छन्। ती दुबै एन्टिरिट्रोभाइरल औषधिहरू जस्तै रिल्पाइभाइन, एटाजानाविर, र सकिनविरसँग अन्तर्क्रिया गर्न सक्छन्। यी औषधिहरू सँगसँगै लिँदा एन्टिरिट्रोभाइरल औषधिको प्रभावकारिता परिवर्तन गर्न र यसको विषाक्तता बढाउन सक्छ। पान्टोप्राजोल वा ओमेप्रजोललाई वारफेरिनको साथ खान्दा रक्तस्राव हुने खतरा बढ्न सक्छ। तसर्थ, तिनीहरू सँगै लिनु हुँदैन। जबकि क्लोपीडोग्रलले प्यानटोप्रजोलले असर नगर्न सक्छ, यो ओमेप्राजोलबाट टाढा रहनु पर्छ।
पन्तोप्राजोल र ओमेप्रजोलले मेथोट्रेक्सेट, एक antimetabolite औषधिसँग अन्तर्क्रिया गर्दछ, र विषाक्तता र साइड इफेक्टको बढेको जोखिम निम्त्याउन सक्छ।
प्यानटोप्राजोल र ओमेप्रजोललाई एकै समयमा लिनु हुँदैन फलामको नुन र अन्य औषधिहरू जुन शोषणको लागि पेट एसिडमा निर्भर गर्दछ। अन्य औषधिहरू जुन पेटको एसिडमा अवशोषणको लागि निर्भर गर्दछ, केमोथेरापी ड्रग्स जस्तै एरोलोटिनिब र दासाटनिब र एन्टिफंगलहरू जस्तै केटोकोनाजोल र इट्राकोनाजोल।
किनभने दुबै पीपीआईहरू कलेजोमा मेटाबोलाइज गरिएको छ, तिनीहरू अन्य ड्रगहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्न सक्छन् जुन CYP2C19 एंजाइम सहित समान इन्जाइमहरू द्वारा प्रशोधन गरिएको छ। तर, अनुसार एफडीए लेबल , यी औषधिहरूमध्ये केही, फेनिटोइन, सिटोलोप्राम, र डायजेपाम सहित, प्यान्टोप्राजोलसँग महत्त्वपूर्ण अन्तरक्रिया भएको देखाइएन। अझै पनि, पीपीआई लिनु अघि कुनै डाक्टरसँग लिनुहुने कुनै पनि औषधिहरू छलफल गर्न महत्त्वपूर्ण छ।
पीपीआईहरूले निश्चित प्रयोगशाला परीक्षणको नतीजालाई असर गर्न सक्छ। पीपीआईहरू THC मूत्र परीक्षणहरूको लागि गलत सकारात्मक हुनको लागि परिचित छन्।
औषधि ड्रग क्लास पन्तोप्राजोल ओमेप्राजोल
रिटोनाभिर Antiretrovirals हो हो
मेथोट्रेक्सेट अनटाइमेटोबोलिट हो हो
ट्याक्रोलिमस इम्युनोसप्रेसिभ हो हो
भोरिकोनाजोल एन्टिफंगल हो हो
Nilotinib केमोथेरापी हो हो
लौह सुकसिनेट फलामको नुन हो हो
मिडाजोलम बेन्जोडियाजेपाइन हैन हो
Phenytoin Antiepileptic हैन हो
Citalopram चयनित सेरोटोनिन पुनःअपटेक इनहिबिटर (एसएसआरआई) एंटीडिप्रेसन्ट हैन हो
सेन्ट जोन्स Wort जडिबुटी हो हो
प्यानटोप्रजोल र ओमेप्रजोलको चेतावनी
प्यानटोप्राजोल र ओमेप्राजोललाई दीर्घकालीन प्रयोगको लागि सिफारिश गरिदैन। दीर्घकालीन प्रयोग एक संग सम्बन्धित छ हड्डी भ f्ग को जोखिम वृद्धि । यदि तपाईलाई अस्टियोपोरोसिस छ भने तपाईले पीपीआईको प्रयोग अनुगमन गर्न सक्नुहुन्छ।
केही डाटाले सुझाव दिएका छन कि पीपीआई औषधिहरूले हृदयघात र स्ट्रोक जस्ता हृदय घटनाहरूको जोखिम बढाउन सक्छ। जे होस्, एफडीए र अन्य रिपोर्टहरू पीपीआईको फाइदा सुदृढ पार्नुहोस् यस जोखिमलाई पछाडि पार्नुहोस्।
किनकि प्यान्टोप्राजोल र ओमेप्रजोल कलेजोमा प्रशोधित हुन्छन्, यिनीहरूलाई समायोजित गर्न सकिन्छ वा कलेजो बिरामी भएकाहरूबाट टाढा हुन सकिन्छ।
पन्तोप्राजोल र ओमेप्राजोलले प्रणालीगत ल्युपस एरिथेमाटोससको दुर्लभ अटोइम्यून रोग जोखिम बढाउन वा बढाउन सक्छ।
पीपीआईको उपचारले क्लोस्ट्रिडियम डिफिसिल संक्रमणबाट पखालाको जोखिम बढाउन सक्छ। यो जोखिम अधिक लामो हुन सक्छ जो अस्पतालमा भर्ती छन्।
दुबै प्यान्टोप्राजोल र ओमेप्रजोल गर्भावस्था कोटि सी मा छन् र नजन्मेको बच्चालाई नोक्सान पुर्‍याउन सक्छ। यदि तपाईं गर्भवती हुनुहुन्छ वा स्तनपान गराउँदै हुनुहुन्छ भने डाक्टर वा स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग सल्लाह लिनुहोस्।
पेन्टोप्रजोल बनाम ओमेप्राजोलको बारेमा प्राय: सोधिने प्रश्नहरू
पान्टोप्राजोल भनेको के हो?
पन्तोप्राजोल (प्रोटोनिक्स) एक प्रोटोन पम्प अवरोधक (पीपीआई) औषधि हो जुन जीईआरडी र इरोसिभ एसोफैगिटिसको उपचारको लागि सिफारिस गरिएको हो। यो अक्सर mg० मिलीग्राम ढिलाइ-रिलीज ट्याब्लेटको रूपमा weeks हप्ता सम्म लिन्छ। यो वयस्क र children बर्ष वा माथिका बच्चाहरूमा लिन सकिन्छ।
ओमेप्रजोल (प्रिलोसेक) एक पीपीआई औषधी हो जुन GERD र इरोसिभ एसोफेगिटिसको उपचारको लागि सिफारिस गरिएको छ। यो एच। पाइलोरी संक्रमण र ग्रहणी वा ग्यास्ट्रिक अल्सरको लागि अनुमोदित छ। यो २० मिलिग्राम ढिलाइ-रिलीज क्याप्सूलको रूपमा लिन सकिन्छ adults देखि weeks हप्ता वयस्कहरू र १ बर्ष उमेरका बच्चाहरूमा।
के प्यानटोप्रजोल र ओमेप्रजोल एकै हुन्?
पंतोप्रजोल र ओमेप्रजोल औषधीको एकै वर्गमा छन्। यद्यपि उनीहरूसँग बिभिन्न स्वीकृत प्रयोगहरू र साइड इफेक्टहरू छन्। तिनीहरू पनि फरक खुराक र योगनहरूमा आउँछन्।
के तपाइँको रक्तचाप तल ल्याउन सक्छ
Pantoprazole वा ओमेप्रजोल राम्रो छ?
प्यानटोप्राजोल र ओमेप्रजोल दुबै जीईआरडी र इरोसिभ एसोफेगिटिसको लागि प्रभावकारी छन्। एक पीपीआई औषधी उपचारको अवस्था र औषधीको लागतमा निर्भर रहँदै अर्कोमा प्राथमिकता पाउन सकिन्छ।
म गर्भवती भएको बेलामा प्यान्टोप्राजोल वा ओमेप्रजोल प्रयोग गर्न सक्छु?
गर्भवती महिलाहरूमा भ्रुण क्षतिको जोखिमको कारणले पान्टोप्रजोल र ओमेप्रजोल सिफारिस गरिदैन। यद्यपि, केहि केसहरूमा फाईदाहरू जोखिमलाई पन्छाउन सक्छन्। यदि तपाईं गर्भवती हुनुहुन्छ भने डाक्टरको परामर्श लिनुहोस्।
के म पान्टोप्राजोल वा ओमेप्रजोल रक्सीको साथ प्रयोग गर्न सक्छु?
रक्सीको सेवनले पान्टोप्राजोल वा ओमेप्रजोलसँग सम्बन्धित केही साइड इफेक्टहरू बढाउन सक्छ। किनकि टाउको दुख्ने र जीवाणु पीपीआईको सामान्य साइड इफेक्ट हुन्, यी साइड इफेक्टहरू खराब हुन सक्छन् जब पीपीआई रक्सीको साथ लिइन्छ।
के ओटीसी ओमेप्रजोल प्रिस्क्रिप्शन जस्तै हो?
ओभर-द-काउन्टर (OTC) ओमेप्राजोलले उस्तै ड्रग र प्रिस्क्रिप्शन ओमेप्रजोलको सामर्थ्य समावेश गर्दछ। ओटीसी ओमेप्रजोल १ O दिनको २० मिलीग्राम ट्याब्लेटहरूमा ओटीसी प्रिलोसेकको रूपमा पाउन सकिन्छ। यो उपचार कोर्स प्रत्येक months महिनामा एक पटक भन्दा बढी लिनुहुँदैन।
के मैले पान्टोप्रेजोल र ओमेप्रजोललाई एकै समयमा लिनु पर्छ?
पंतोप्रजोल र ओमेप्रजोल एकै साथ लिनुहुन्न। ती पेटमा ग्यास्ट्रिक एसिडको उत्पादन बन्द गरेर उस्तै तरिकाले कार्य गर्दछन्। तिनीहरूलाई सँगै लिएर प्रतिकूल प्रभावको जोखिम बढाउन सक्छ।
यो एक गर्मी फ्लू… वा अरू केहि हो?
म कसरी प्राकृतिक रूप मा एक खमीर संक्रमण बाट छुटकारा पाउन सक्छु
एलर्जी औषधि काउन्टर मा सुक्खा छैन
के तपाइँ दुध न पिउनु बाट ल्याक्टोज असहिष्णु बन्न सक्नुहुन्छ
कसरी एक मानिस एक खमीर संक्रमण को उपचार गर्न सक्नुहुन्छ?
म कती पटक xanax .5 mg लिन सक्छु
एक मूत्र पथ संक्रमण को उपचार को लागी सबै भन्दा राम्रो तरीका हो